Church ကို – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို
ပထမဦးဆုံး, ထိုသို့တောင်းထိုက်သည်: သူတို့အဆိုရသည့်အခါခရစ်ယာန်တွေကိုအဘယျသို့ဆိုလိုဘူး တစ်, စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း?
ဖလောရမှသူ Andrea Bonaiuto အားဖြင့်အသင်းတော်များ၏အောင်မြင်မှု
အမြင်ကျယ်, ကျနော်တို့သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကိုယုံကြည်သောသူတို့အဓိပ်ပာယျ–ခမည်းတော်ဘုရား; ယရှေုသညျ, ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို; နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်–ယရှေုသညျသူ၏အဝန်ကြီးဌာနစဉ်အတွင်းဆုံးမသွန်သင်သောအခွခေံမူ. မိမိတို့ကိုယ်ကိုခရစ်ယာန်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့သူကလူအုပျစုရှိပါတယ်ကွောငျ့, သို့သော်ကျွန်တော်တို့သတိပြုရကြမည်ရန်ရှိသည်, ဒါပေမဲ့သူအဝေးသညျယရှေုဆုံးမသွန်သင်ဘာမှထက်ကျော်လွန်သွားကြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနှင့်အတွေးအခေါ်များကဆက်ပြောသည်ပြီ.
ဒါကြောင့်, “အဆိုပါချာ့” ယရှေုသညျမူရင်းသွန်သင်ချက်အတိုင်းလိုက်နာသောသူတို့အားလွှမ်းခြုံ (အမျိုးမျိုးသောဒီဂရီ), သို့သော်ယေရှုဘယျအရာကိုဆိုလိုကြောင်း? ထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်, အ Sciptures ဆနျးစစျဖို့လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
တွင် မဿဲ၏ဧဝံဂေလိတရားကို (16:18) ယရှေုသညျပတေရုသအားမိန့်တော်မူ၏, "မင်းကိုပြောမယ်, သင်သည်ပေတရုဖြစ်၏, ဤကျောက်ပေါ်မှာငါ့အသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်လိမ့်မည်, နှင့်ငရဲ၏တန်ခိုးကြောင့်ဆန့်ကျင်မနိုင်ရကြလိမ့်မည်။ "နောက်ပိုင်းမှာအတွက် မဿဲ 28:20, Jesus assures His followers He would remain with them “always, အသက်၏အဆုံးမှ။ "အလားတူပဲ, in John’s Gospel, ယေရှုသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအစဉ်အမြဲအသင်းတော်နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးထား (14:16).
သခင်ဘုရားကိုတည်ထောင်ပါဝင်ကြောင်းမြောက်မြားစွာကမျြးစာကျမ်းပိုဒ်ရှိပါတယ် "ဖကျြဆီးခံရဘယ်တော့မှရကြလိမ့်မည်တဲ့နိုငျငံတျောသညျ။ " (ဥပမာအားဖြင့်, ကိုကြည့်ရှု ဒံယေလစာအုပ် (2:44), ကျဟရှောယ (9:7) နှင့် မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း (13:24).)
သူတို့အားအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ကျနော်တို့ဘုရားကျောင်းသညျယရှေု founded- နြိုတ, စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကျောင်း-has ပြိုလဲခြင်းနှင့်ယနေ့တိုငျအောငျစိန့်ပေတရု၏ နေ့မှစ. စဉ်ဆက်မပြတ်ရပ်နေ၏သိရသည်အပေါင်းတို့နှင့်သားစဉ်မြေးဆက်ဖို့ "ပစ္စုပ္ပန်တည်နေကြလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှ, ထာဝရအမြဲတမ်း" (စိန့်အဖြစ်. ရှင်ပေါလုသည်မိမိအတွက် wrote ဧဖက်မှပေးစာ 3:21).
ဤသည်ကိုသူတို့ကဆိုသည်ဘယ်သူသည်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်သူမ၏အားပေးခဲ့ကြသောကြောင့်, အသင်းတော်ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုနဂိုအတိုင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုလိုသည်, "ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်လိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့ငါ့စကား "ကွယ်ပျောက်မည်မဟုတ် (ကြည့်ရှု မဿဲ 24:35 နှင့်တမန်တော်မြတ် ကျဟရှောယ 40:8).
မိမိအခုနှစ် တိမောသေဖို့ပထမဦးစွာပေးစာ (3:15), Saint Paul goes so far as to call the Church “the pillar and bulwark of truth.” Because His Church has been professing the same doctrine for nearly 2,000 အနှစ်, သူ့ရဲ့ခေတ်ပြိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှယေရှုရဲ့တပည့်၏မူလရပ်ရွာချိတ်ဆက်ထားတဲ့မပြတ်မတောက်သမိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းရှိ. ဒါကြောင့်, ဒါကြောင့်တမန်တော်များလက်ထက်၌ပြန်လည်အချိန်အားဖြင့်ခေတ်ပြိုင်ခရစ်ယာန်အလောင်းတစျဦး၏သွန်သင်ချက်တွေကိုခြေရာကောက်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှရှိရမည်.
ဒီနေ့ရဲ့မျိုးစုံနှင့်မတူကွဲပြားသောခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းအပေါငျးတို့သ၏, သာကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်စစ်မှန်၏သူမ၏တောင်းဆိုမှုများအတည်ပြုရန်နိုင် တမန်တော်အောင်မြင်သော, သို့မဟုတ်သစ္စာရှိရှိယနေ့တိုင်ပထမရာစုမှတမန်တော် '' သွန်သင်ချက်တွေကိုသယ်ဆောင်တော်မူကြောင်းကိုဂိုဏ်းအုပ်၏အေးလိုင်း. ဤသည်သမ္မာတရားကိုခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အရေးအသား-ထိုအစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအဘတို့၏ရေးသားချက်၏ကိုယ်ကထောက်ခံသည်–သောတမန်တော်များထံမှတိုက်ရိုက်ယုံကြည်ခြင်းသင်ယူသောသူလူတို့ရေးစပ်စာလုံးနဲ့စတင်. ဤရွေ့ကားအရေးအသားအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ကောင်းသောစာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်စာအုပ်ဆိုင်မှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါ.
non-ကက်သလစ်မကြာခဏတခုသော authoritative ဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုငြင်းပယ်, ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဘုရားကျောင်း, နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အမှန်တရားက၎င်း၏တိုက်ပိတ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်သမ္မာကျမ်းစာကြည့်, ကမျြးစာကို Self-စကားပြန်ဖြစ်ယုံကြည်.
ဖြစ်ချင်တော့, ကစိတ်ကူးကျမ်းစာ၌အားဖြင့်ချေပသည်, သူ့ဟာသူ. စိန့်ကိုကြည့်ပါ ပေတရု၏ဒုတိယအပေးစာ (1:20-21).
ထို့အပြင်, ဒါကြောင့်အခြေခံကျကျသမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်အဘယ်သို့သောအကြောင်းသဘောမတူကြောင်း "ကျမ်းစာ-သာ" ဂိုဏ်း၏လူအစုအဝေးရှိပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်အောက်ကဖြစ်ပါတယ်! ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုတဦးရဲ့ပုဂ္ဂလိကအနက် fallible သည်ဆိုပါက (နှင့်လူသားတစ်ဦး၏အနက်ကိုဖြစ်ခြင်း, ထိုကဲ့သို့ ... ဖြစ်နိုင်သည်) ထို့နောက်သမိုင်းဆိုင်ရာဘုရားကျောင်းအရေးအသားတမန်တော်နှင့်၎င်းတို့၏ဆက်ခံမြင့်မြတ်သောသမ္မာကျမ်းစာ၌ဘတ်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းထွက်နေထိုင်ခဲ့သောလမ်းသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောများမှာ.
စိန့်စတီဖင်၏အသက်: အရာ၌ခန့်နှင့် Benozzo Gozzoli ကကူညီ Fra Angelico အားဖြင့်ဆွမ်းများပေးကမ်း
ဤသူတို့သည်အစောပိုင်းဘုရားကျောင်းအဘတို့၏ဤအရေးအသားခိုင်မြဲစွာကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ဆုံးမဩဝါဒဆက်လက်သရုပျဖျော, လူ့အမှားနှင့်အပြစ်နေသော်လည်းထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည့်, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း, ရှေးကာလက၎င်း၏အမာခံအခြေခံမူစွန့်ခွာဖို့သာမန်အဖွဲ့အစည်းစေကြပြီမယ်လို့နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖိအားပေးမှု. ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းများ၏ဆက်လက်အပေါ်သို့ Remarking (နှင့်အထူးသဖြင့်ရောမအသင်းတော်များ၏) ဒုတိယရာစုအတွက်, Saint Irenaeus of Lyons called her “the greatest and most ancient Church known to all” in ယူဖောက်ပြန်ဆန့်ကျင် 3:3:2.
သီအိုရီအမျိုးမျိုးကိုသူမ၏မူလအစ-သို့မဟုတ်ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားမှဘုရားကျောင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာကွံခဲ့ကြကြောင်းမှတ်ချက် ကပယ်ကိုရှင်းပြ တဦးတည်းဟုပြောစေခြင်းငှါ,. အသုံးအများဆုံးထိုကဲ့သို့သောသီအိုရီကက်သလစ်ဘာသာစတုတ္ထရာစု၌ဖြစ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏စွဲချက်တင်, ရောမအင်ပါယာတစ်လျှောက်လုံးအချိန်ကိုဧကရာဇ်ကွန်ပတ်ပတ်လည်မဟာတရားဝင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ. ဒီသီအိုရီကိုခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၏ကြီးမားသောအဘို့နောက်ဆုံးမှာပြောင်းလဲ၏ကြီးမားသောရောက်လာမှုကြောင့်အယူမှားလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်ယိုယွင်းဖြစ်လာရရှိထားသူ. ဒါပေါ့, ဒီသီအိုရီကိုမှကျြောလှားနိုငျအတားအဆီးကွန် predate သောဒေသနာအရေးအသားထဲမှာကက်သလစ်အယူဝါဒ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအဘတို့၏သမိုင်းဆိုင်ရာစာပေများအားကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်ဒီသရုပ်ပြ.
စိန့်စတီဖင်၏အသက်: Benozzo Gozzoli ကကူညီ Fra Angelico အားဖြင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်ကျောက်
ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ရှေးခေတ်စာရေးဆရာများ၏ပေးခြင်းကက်သလစ် irrefutable ဖြစ်ပါသည်.
စဉ်းစားကြည့်ပါ, ဥပမာအားဖြင့်, အန္တိအုတ်မြို့သို့၏စိန့် Ignatius, သူကတစ်နှစ်ဝန်းကျင်သေဆုံး 107. Ignatius တမန်တော်ပေတရုနှင့်ယောဟန်၏တစ်ဦးကျောင်းသားနှင့်လူ့ဇာတိကိုငြင်းပယ်သောသူအယူမှားသူတိုက်ဖျက်ရေးအသင်းတော်ရဲ့ပှဲတျောအသှနျသငျအသုံးပြု.
သူကဘုရားကျောင်းတစ်ဦးသငျ့လျြောသောနာမကိုအမှီအဖြစ် "ကက်သလစ်" ဟူသောဝေါဟာရကိုသုံးစွဲဖို့စံချိန်ပေါ်တွင်အစောဆုံးစာရေးဆရာဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူးရှိပါတယ်. "ဟုအဆိုပါဘိရှော့ပုံပေါ်ရာ၌, လူအရှိကြစေ,"ဟုသူကရေးသားခဲ့သည်; "ရုံသညျယရှေုခရစျသရာ၌အဖြစ်, ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရှိ၏။ "
တိုက်ဆိုင်, အန္တိအုတ်မြို့သို့, Ignatius '' bishopric, ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်များပထမဦးဆုံး "ခရစျယာ" ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်ရာအရပ်ဖြစ်ဖို့လည်းဖြစ်ပျက် (တမန်တော်များ၏တမန်တော်မြင် 11:26).
အဲလ်ဘရက်ခ် Durer ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ချစ်စဖွယ်
နှုတ်ကပတ်တော်ကို "သုံးပါးတစ်ဆူ" ၏အစောဆုံးစာဖြင့်ရေးသားအသုံးပြုမှုအန္တိအုတ်မြို့သို့ထံမှလာ, လွန်း. အခြားဘိရှော့တစ်ခုစာ၌ထင်ရှားကျော်ကြားသော, စိန့်သော်ဖိလု, အကြောင်းထဲမှာ 181 (ကြည့်ရှု Autolycus ရန် 2:15), စိန့် Irenaeus wrote, "သခင်မညျးတျောကိုထက်အခြားမှဖြစ်လျှင်, ဘယ်လောက်သူဟာမှန်ကန်စွာမုန့်ကိုယူနိုင်ကြ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဲ့သို့တူညီသောဖန်ဆင်းခြင်းအရာဖြစ်ပါသည်, နှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖို့ကဝန်ခံ, နှင့်ဖလား၌အရောအနှောသူ၏ကြောင်းအတည်ပြု ?" (ကြည့်ရှု ယူဖောက်ပြန် 4:33:2).1
ဒါကြောင့်, ဘယ်လိုအခြားသူများအားသူမ၏ထူးမြတ်သောအကြောင်းမရှိ၏ Ignatius '' အသိအမှတ်ပြုအတူရောမအသင်းတော်အဘို့မိမိတို့အထင်အမြင်သေးပြန်လည်သင့်မြတ်နိုင်ပါတယ်? သူကရောမနိုငျငံ၏အရပျ၌သမ္မတရရှိထားသူသောက "ဘုရားကျောင်းသူမ၏ဟုခေါ်တွင် ...;"နှင့်ပြောသွားလေ၏, "သင်အဘယ်သူမျှမငွူစူကြပြီ, သငျသညျကိုသွန်သင်ကြပြီပေမယ့်အခြားသူများကို. ငါ "သင်သည်အဘယ်သို့သင့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပညတ်ထားကြပြီပြီအင်အားသုံး၌တည်နေစေခြင်းငှါသာအလိုရှိသော (ရောမ, လိပ်စာ; 3:1).
Irenaeus သူ့အချိန်ဆင်းရောမမြို့၏ဂိုဏ်းအုပ်စာရင်း, မှတ်ချက်တွေ, "ဒီအမိန့်ထဲမှာ, နှင့်တမန်တော်များ၏ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအားဖြင့်အသင်းတော်၌နှိမ့်ချပေးအပ်, သမ္မာတရားကိုဟောပြောခြင်း "ကျွန်တော်တို့ကိုမှဆင်းလာခဲ့သည် (ကြည့်ရှု ယူဖောက်ပြန် 3:3:3).
တချို့ကကွပ်မျက်ကဲ့သို့တူညီသောအသက်ရှုအတွက် Marian ဩဝါဒ Ignatius '' ဖော်ပြထားသဖြင့်ကြောက်ကြလိမ့်မည်? "မာရိ၏အပျိုစင်,"ဟုသူကရေးသားခဲ့သည်, "သူမ၏ကလေးမွေးဖွားပေးခြင်း, နှင့်လည်းသခင်ဘုရားအသေခံ, ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်း မှစ. ပုန်းရှောင်ခဲ့ကြ:-three နက်နဲသောအရာကျယ်လောင်စွာကြွေးကြော်, ဒါပေမယ့် "ဘုရားသခငျ၏တိတ်ဆိတ်စွာကိုပြု (ကြည့်ရှု ဧဖက် 19:1).
အလားတူပဲ, သူကရေးသားခဲ့သည်, "မာရိ, လူအကြင်ပေမယ်သို့ရာတွင်ဆဲကညာ, နာခံမှုဖြစ်ခြင်း, သူ့ကိုယ်သူအဘို့နှင့်မြေတပြင်လုံးသည်လူ့မျိုးနွယ်အဘို့ကယ်တင်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်. … ထို့ကြောင့်, ဧဝရဲ့မနာခံမှု၏ထုံး "မာရိ၏နာခံမှုကိုအားဖြင့်လွတ်ခဲ့သည် (see Heresies 3:22:4).
ယနေ့တွင်, အဘယျသို့အလိုတခုတည်းကက်သလစ်နှင့် Non-ကက်သလစ်ခရစ်တော်၏အသားအဖြစ်အတိအလင်းသိမှတ်မှတ်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမခေါ်, သူမ၏သှနျသငျသာလွန်များအတွက်ရောမအသင်းတော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, နဲ့ Mary ရဲ့အပျိုစင်ဘ၏နက်နဲသောအရာကိုကြည်ညိုလေးမြတ်?
အဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းကိုးရာစုနှစ်များစွာကလွန်ခဲ့တဲ့တူညီသောအမှုအရာဟုပြောသည်ပြုသူတစ်ဦးသည်လူနှင့်သူ၏တူသောစိတ်တစ်ခေတ်နှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားဘာမှကောက်ချက်ချသင့်တယ်?